युभेन्टसलाई इटालीको प्रथम श्रेणीबाट ‘किक आउट’ गर्ने धम्की – Talking Sports
युभेन्टसलाई इटालियन फुटबल संघले बिवादास्पद बिद्रोही युरोपियन सुपर लिगबाट आफ्नो नाम फिर्ता नलिने हो भने प्रथम श्रेणीको फुटबल इटालियन सिरी आ बाट किक आउट गर्ने धम्की दिएको छ ।
असफल भएको युरोपियन सुपर लिगको योजनाबाट बाहिरिन स्पेनिस महारथीहरु रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनासँगै युभेन्टस अर्को एक मात्र टोली हो । गत सप्ताह यी तीन टोलीको समुहले एक लामो बिज्ञप्ति जारी गर्दै आफू सुपर लिगको योजनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र आगामी कदमका लागि दुई ठूलो सर्वोच्च निकाय फिफा र युएफासँग छलफल गर्ने बताएको थियो ।
के हो युरोपियन सुपर लिग ?
“संस्थापन क्लबहरुले धेरै कुरा सहनु परेको छ र यो क्रम जारी पनि छ । तेश्रो पक्षबाट अस्विकार्य रुपमा यो प्रोजेक्ट बन्द गर्नका लागि धम्की, दवाब र गाली गलौज पनि हुँदै आएको छ । त्यसैले हामी फुटबलको इकोसिस्टम नबिग्रिने गरि रचनात्मक छलफलका साथ यसको समाधान खोज्नेछौं,” उक्त बिज्ञाप्तिमा लेखिएको छ ।
सुपर लिगको योजना सार्वजनिक हुने बित्तिकै यसको लागि हरियो झण्डा देखाएका आर्सनल, एसि मिलान, एट्लेटिको म्याड्रिड, चेल्सी, इन्टर मिलान, लिभरपुल, म्यानचेस्टर युनाइटेड, म्यानचेस्टर सिटी र टोटेन्ह्यामले आफ्नो नाम फिर्ता लिदै युएफको कारवाही स्विकार्ने बताएका थिए ।
सुपर लिगका मुख्य योजनाकार मध्येका एक युभेन्टस अध्यक्ष आन्द्रे एग्नेलीले भने योजनाबाट नाम फिर्ता लिएका छैनन् । इटालियन फुटबल संघका अध्यक्ष ग्याब्रिएले ग्रभिनाले युभेन्टस अझै पनि पछि नहट्ने हो भने उसलाई प्रथम श्रेणीबाटै निकालिने धम्की दिएका छन् ।
इटालियन फुटबल संघले के भनेको छ ?
२०२१–२२ को सिजन अघि आफ्नो नाम फिर्ता नलिने हो भने युभेन्टस इटालियन सिरी आ बाट बाहिरिनेछ । यसको मतलब युभेन्टसले आगामी सिजन फुटबल नै नखेल्न सक्छ ।
“नियम स्पष्ट छ । यदि अर्को सिजनमा प्रवेश गर्दा युभेन्टस अझै पनि सुपर लिगकै हिस्सा रहन्छ भने उसले सिरी आ मा सहभागिता जनाउन पाउने छैन । म समर्थकहरुलाई सरी भन्न चाहन्छु र नियम भनेको नियम हो । यो सबैमा लागु हुन्छ । आशा गरौं यो समयस्या चाडै समाधान हुनेछ,” ग्रभिनाले नेपल्सको एक रेडियो स्टेसनमा दिइएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
ग्रभिनाको यो प्रतिक्रियाले युभेन्टसका खेलाडी, स्टाफ र समर्थकहरुको ध्यानाकर्षण गराउने नै छ भने उसले युरोपियन सुपर लिगबाट नाम फिर्ता लिन बाध्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यथार्थ के पनि हो भने मात्र तीन टिम साथमा रहँदा अहिले युरोपियन सुपर लिग अस्तित्वमै छैन ।